फसादमा निकिता - मनोरञ्जन - नेपाल
शृंखला खतिवडाले मिस नेपालको ताज पहिरिनेबित्तिकै निकिता चण्डकले अभिनय करिअर सुरु गरिन् । रानीमहलबाट उनको यात्रा सुखद हुने अपेक्षा थियो । लोभलाग्दो पारिश्रमिक पाइन् । निर्माण पक्षले उनैलाई प्राथमिकतामा राख्यो । दुर्भाग्य ! २० प्रतिशत छायाँकन पूरा नहुँदै फिल्म रोकिएको छ । कारण हो, निर्माता वेदप्रसाद भुसाल र प्रोडक्सन डिजाइनर गणेश सापकोटाबीचको किचलो । भुसालले सापकोटामाथि आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लगाए । तर, सापकोटा त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् । फिल्म निर्माणमा अहिलेसम्म दुई करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । सोही कारण फिल्मले निरन्तरता पाउला भन्नेमा शंका उब्जिन थालेको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा परेकी छन्, निकिता । न अर्को फिल्म खेल्नु, न त रानीमहल कुरिराख्नु ! क्या फसाद !